Iintshatsheli zeMfundo yeArhente yokuHamba: Isigqeba seeNdawo zokuHlala ngeembadada uGordy Silverman Passes
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » abantu » Iintshatsheli zeMfundo yeArhente yokuHamba: Isigqeba seeNdawo zokuHlala ngeembadada uGordy Silverman Passes
Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
UGordy Silverman uyadlula
UGordy Silverman, uMlawuli oyiNtloko wezeMfundo kwiShishini kwi-Unique Vacations Inc. (UVI) kunye nommeli wexesha elide kwimfundo yearhente yokuhamba oncede ekuphuculeni inkqubo yesayini yeSandals Resorts 'Certified Sandals Specialist (CSS), usweleke ngoJulayi 24 emva kwedabi elifutshane lomhlaza. Wayeneminyaka engama-64.
USilverman wayeyintshatsheli ethandekayo yeearhente zokuhamba, ejoyina i-Unique Vacations Inc., iiNdawo ekuchithelwa kuzo iiholide zeSnadals kunye neBeaches Resorts, ngo-1987.
Kungekudala waba bubukho boNxweme oluseNtshona lwe-UVI.
Ukuzinikezela kukaGordy kwinkampani kunye nolwazi kushishino lokuhamba kube negalelo kwimpumelelo ye-UVI.
USilverman ujoyine iUnique Vacations Inc. Waqala kwiofisi ye-UVI eMiami kodwa kamva wavula ubukho be-UVI kwi-West Coast. “Ukuzinikela kukaGordy ixesha elide kwinkampani kunye nolwazi kushishino lokuhamba kube sisixhobo esihle kwimpumelelo yethu. Uyakukhunjulwa kakhulu, ”utshilo uSadler.
Wongeze wathi, “uGordy angachazwa ngokulula 'njengomama wabo bonke abaqeqeshi' kwicandelo lezokhenketho. Wayebandakanyeka ngokuthe ngqo kuzo zonke iinkalo zoqeqesho lwentengiso kwinkampani yethu ukusuka kwii-BDM zethu ezisandula kuqeshwa ukuya kushishino lokuhamba ngokubanzi. UGordy uphuhlise ngempumelelo kwaye wasungula isiQinisekiso sethu IziNtshontsho Inkqubo yeengcali. Ngaphezulu kweminyaka engama-25, wayengumntu oqhubayo kwiiCeshshops zeCSS, egcina imiyalezo yokuthengisa kunye noqeqesho olutsha kunye nolufanelekileyo kubacebisi bokuhamba unyaka nonyaka. Uye waqonda 'iindibano' zethu ezithandwayo, iziganeko ezifundisayo nezonwabisayo eziqeqeshe amashumi amawaka abacebisi bokuhamba kunye namaqabane kumzi mveliso kuMantla Merika nakwihlabathi liphela. Iimbadada kunye neelwandle Resorts… Kulula kakhulu, uGordy wakha isikhokelo kunye nesiseko soQeqesho oluQhelekileyo lweeNtengiso kuqeqesho lwehlabathi neqela esimi kulo ngokuzingca namhlanje. Ngenxa yoko, sonke sinetyala laphakade. ”
Abacebisi ngezohambo kunye nabahlobo kumzi mveliso bayamenywa ukuba bafake isandla kwiingcinga kunye neenkumbulo zikaGordy kwiSandals Memory Jar esekwe ngumhlobo kaGordy wexesha elide kunye nogxa wakhe we-UVI, uMaura Cecere e [imeyile ikhuselwe] .